Free Signal – Myanmar Forex Villa
Category Archives: Free Signal
EURJPY – Free Signal
By AdminFree Signal
ယခု Post လေးမှာတော့ EURJPY Pair ကို Daily Chart Analysis လုပ်ထားပြီး Signal လေးတွေ ပေးထားပါတယ်။ Daily Chart ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ရက်ကနေ တစ်ပတ် ဆယ်ရက် အထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ မိမိအကောင့်ရဲ့ Equity ပေါ်မူတည်ပြီ အဆင်ပြေသလို Trade လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ….။ မရှင်းတာ နားမလည်တာများ ရှိရင်လဲ Comment မှာ မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ…
ယခု Post လေးမှာတော့ EURJPY Pair ကို Daily Chart Analysis လုပျထားပွီး Signal လေးတှေ ပေးထားပါတယျ။ Daily Chart ဖွဈတဲ့အတှကျ တဈရကျကနေ တဈပတျ ဆယျရကျ အထိ ကွာနိုငျပါတယျ။ မိမိအကောငျ့ရဲ့ Equity ပျေါမူတညျပွီ အဆငျပွသေလို Trade လို့ရပါတယျခငျဗြာ….။ မရှငျးတာ နားမလညျတာမြား ရှိရငျလဲ Comment မှာ မေးလို့ရပါတယျခငျဗြာ…
AUD/USD – Analysis
ယခု Post လေးမှာတော့ AUDUSD Pair ကို Daily Chart Analysis လုပ်ထားပြီး Signal လေးတွေ ပေးထားပါတယ်။ Daily Chart ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ရက်ကနေ တစ်ပတ် ဆယ်ရက် အထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ မိမိအကောင့်ရဲ့ Equity ပေါ်မူတည်ပြီ အဆင်ပြေသလို Trade လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ….။ မရှင်းတာ နားမလည်တာများ ရှိရင်လဲ Comment မှာ မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ…
ယခု Post လေးမှာတော့ AUDUSD Pair ကို Daily Chart Analysis လုပျထားပွီး Signal လေးတှေ ပေးထားပါတယျ။ Daily Chart ဖွဈတဲ့အတှကျ တဈရကျကနေ တဈပတျ ဆယျရကျ အထိ ကွာနိုငျပါတယျ။ မိမိအကောငျ့ရဲ့ Equity ပျေါမူတညျပွီ အဆငျပွသေလို Trade လို့ရပါတယျခငျဗြာ….။ မရှငျးတာ နားမလညျတာမြား ရှိရငျလဲ Comment မှာ မေးလို့ရပါတယျခငျဗြာ…
By AdminFree Signal, Technical Analysis
ယခု Post လေးမှာတော့ USDJPY Pair ကို Daily Chart Analysis လုပ်ထားပြီး Signal လေးတွေ ပေးထားပါတယ်။ Daily Chart ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ရက်ကနေ တစ်ပတ် ဆယ်ရက် အထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ မိမိအကောင့်ရဲ့ Equity ပေါ်မူတည်ပြီ အဆင်ပြေသလို Trade လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ….။ မရှင်းတာ နားမလည်တာများ ရှိရင်လဲ Comment မှာ မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ…
ယခု Post လေးမှာတော့ USDJPY Pair ကို Daily Chart Analysis လုပျထားပွီး Signal လေးတှေ ပေးထားပါတယျ။ Daily Chart ဖွဈတဲ့အတှကျ တဈရကျကနေ တဈပတျ ဆယျရကျ အထိ ကွာနိုငျပါတယျ။ မိမိအကောငျ့ရဲ့ Equity ပျေါမူတညျပွီ အဆငျပွသေလို Trade လို့ရပါတယျခငျဗြာ….။ မရှငျးတာ နားမလညျတာမြား ရှိရငျလဲ Comment မှာ မေးလို့ရပါတယျခငျဗြာ…
Free Forex Signal USDJPY (08-01-18)
Free Forex Signals မှ ရရှိလာသော Signals များဖြစ်ပါသည်။ USDJPY အတွဲ ဖြစ်ပါသည်။
ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ အစအဆုံး ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။
Free Forex Signals မှ ရရှိလာသော Signals မြားဖွဈပါသညျ။ USDJPY အတှဲ ဖွဈပါသညျ။
ယခု Post လေးမှာတော့ EURNZD Pair ကို H4 Chart Analysis လုပ်ထားပြီး Signal လေးတွေ ပေးထားပါတယ်။ H4 Chart ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ရက်ကနေ တစ်ပတ်5ရက် အထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ မိမိအကောင့်ရဲ့ Equity ပေါ်မူတည်ပြီ အဆင်ပြေသလို Trade လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ….။ မရှင်းတာ နားမလည်တာများ ရှိရင်လဲ Comment မှာ မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ…
ယခု Post လေးမှာတော့ EURNZD Pair ကို H4 Chart Analysis လုပျထားပွီး Signal လေးတှေ ပေးထားပါတယျ။ H4 Chart ဖွဈတဲ့အတှကျ တဈရကျကနေ တဈပတျ5ရကျ အထိ ကွာနိုငျပါတယျ။ မိမိအကောငျ့ရဲ့ Equity ပျေါမူတညျပွီ အဆငျပွသေလို Trade လို့ရပါတယျခငျဗြာ….။ မရှငျးတာ နားမလညျတာမြား ရှိရငျလဲ Comment မှာ မေးလို့ရပါတယျခငျဗြာ…
ယခု Post လေးမှာတော့ AUDCHF Pair ကို H4Chart Analysis လုပ်ထားပြီး Signal လေးတွေ ပေးထားပါတယ်။ H4 Chart ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ရက်ကနေ တစ်ပတ်5ရက် အထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ မိမိအကောင့်ရဲ့ Equity ပေါ်မူတည်ပြီ အဆင်ပြေသလို Trade လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ….။ မရှင်းတာ နားမလည်တာများ ရှိရင်လဲ Comment မှာ မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ…
ယခု Post လေးမှာတော့ AUDCHF Pair ကို H4 Chart Analysis လုပျထားပွီး Signal လေးတှေ ပေးထားပါတယျ။ H4 Chart ဖွဈတဲ့အတှကျ တဈရကျကနေ တဈပတျ5ရကျ အထိ ကွာနိုငျပါတယျ။ မိမိအကောငျ့ရဲ့ Equity ပျေါမူတညျပွီ အဆငျပွသေလို Trade လို့ရပါတယျခငျဗြာ….။ မရှငျးတာ နားမလညျတာမြား ရှိရငျလဲ Comment မှာ မေးလို့ရပါတယျခငျဗြာ…
Free Forex Signals မှ ရရှိလာသော Currency (NZDUSD) အတွက် Signal ကို တင်ထားပေးပါတယ်။ Good Luck… All Traders!!!
Free Forex Signals မှ ရရှိလာသော Currency (GBPUSD) အတှကျ Signal ကို တငျထားပေးပါတယျ။ Good Luck… All Traders!!!
Free Forex Signals (EURJPY)
By Rob GrenzebackFree Signal
ကျွန်တော်တို့ဟာ Forex forecasting လုပ်တဲ့အခါ မှာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းတာကို အခြေခံ အားဖြင့် နည်းလမ်း နှစ်မျိုး ဖြင့် အသုံးပြုကြပါတယ်။
ကြှနျတျောတို့ဟာ Forex forecasting လုပျတဲ့အခါ မှာ ကွိုတငျခနျ့မှနျးတာကို အခွခေံ အားဖွငျ့ နညျးလမျး နှဈမြိုး ဖွငျ့ အသုံးပွုကွပါတယျ။
By AdminFree SignalUSDJPY
Free Forex Signals မှ ရရှိလာသော Currency (USDJPY) အတွက် Signal ကို တင်ထားပေးပါတယ်။ Good Luck… All Traders!!!
Free Forex Signals မှ ရရှိလာသော Currency (USDJPY) အတှကျ Signal ကို တငျထားပေးပါတယျ။ Good Luck… All Traders!!!
By AdminFree SignalNZDUSD
Free Forex Signals မှ ရရှိလာသော Currency (NZDUSD) အတှကျ Signal ကို တငျထားပေးပါတယျ။ Good Luck… All Traders!!!
Free Forex Signals မှ ရရှိလာသော Currency (EURJPY) အတွက် Signal ကို တင်ထားပေးပါတယ်။ Good Luck… All Traders!!!